Gobol soo saaray sharci adag oo la marsiinayo raga iyo Dumarka kufsiga geesta !! | Somalia News
Gobol soo saaray sharci adag oo la marsiinayo raga iyo Dumarka kufsiga geesta !!
Gobol kuyaala dalka Nageria ayaa soo saraaray sharciyo adag oo la marsiinayo raga iyo dumarka falalka kufsiga ah geesta, waxaana sharciyadan yihiin kuwa la doonayo in lagu yareeyo ama meesha looga saaro falalka kufsiga ah.
Barasaabka gobolka Kaduna, ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee Nigeria Nasir Axmad el-Rufai, ayaa saxixay sharci ciqaab adag la marinayo qofka kasta oo kufsi u geesta caruurta iyo sidoo kale dadka waa weyn intaba.
Sharcigan laga hirgalinayo gobolka Kaduna ayaa dhigaya in ninkii kufsi u geesta caruur da’dooda ka yartahay 14-sano jir la isugu daro dil iyo in xaniinyaha laga saaro halka ninkii kufsada qof qaan gaar ah laga saarayo xaniinyaha laguna ridayo xabsi daa’in.
Waxa uu sidoo kale sharcigan cusub ee ka hirgalayaa gobolka kuyaala Nageria dhigayaa haddii haweeneyda lagu helo kufsiga caruurta yar yar iyana la marin doono ciqaab adag oo ay ka mid tahay in laga saaro qaar ka mid xubnaha taranka iyo waliba dil.
Sharciga cusub uu saxiixay Barasaabka gobolka Kaduna ayaa ogolaanaya in Warbaahinta lagu daabaco magacyada dadka kufsiga u geestay caruurta da’dooda ka yar tahay 14-sano jirka ah.
Sharciyadan adag uu soo saaray gobolka Kaduna ee dalka Nageria ayaa u muuqda mid lagu cabsi galinayo dadka kufsiga geesta, waxaana sharcigan soo dhaweeyay bulshada kunool gobolkaasi oo aaminsan in uu xal u noqon karo kufsiga.
Next articleEedeysane lagu qabtay Cadaado oo qirtay in uu ballamiyay gabadhii dilka iyo kufsiga loogu gaystay Muqdisho